Patones de Arriba, မက်ဒရစ်၏အနက်ရောင်ဗိသုကာ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | Espana, ခရီးသွား
Patones de Arriba သည်တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိသည် Sierra del Ayllón နှင့်ခေါ်ဆိုမှု၏လူမျိုးပိုင် အနက်ရောင်ဗိသုကာဒီofရိယာ၏ပုံမှန်။ ၎င်းကိုအိမ်တွင်အလွန်ပေါများသောအိမ်များနှင့်မှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုပေးသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်၎င်းကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်နေထိုင်သူခြောက်ရာခန့်မျှသာရှိသော Patones de Arriba သည်တစ်ခုဖြစ်သည် မက်ဒရစ်အတွက်အများဆုံးချစ်စရာကောင်းမြို့များ ထို့ကြောင့်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်အရေးပါသောခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု။ သင်ဤမြို့ကိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 Patones de Arriba တွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်နည်း။
1.1 san jose ဘုရားကျောင်း
1.2 သံလွင်၏အပျိုကညာ၏ Hermitage
1.3 အဆိုပါ Reguerillo ဂူ
1.4 Castro Dehesa de la Oliva ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ
1.5 သံလွင် pontoon
1.6 Patones နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလှုပ်ရှားမှုများ
2 Patones ၏တစ် ဦး ကသိချင်စိတ်
3 Patones de Arriba တွင်ဘာစားရမည်နည်း
4 Patones အတွက်ရာသီဥတု
Patones de Arriba တွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်နည်း။
တောင်တန်းမြို့သည်မက်ဒရစ်မှ ၆၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည် Jarama မြစ် နှင့်အမြင့်ရှစ်ရာမီတာ။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ Patones de Arriba ၏အိမ်များသည်သူတို့၏ထူးခြားသောအမှောင်ထုနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာပုံပန်းသဏ္forာန်အတွက်သင်၏လည်ပတ်ရန်ထိုက်တန်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက် slate ၏ Ecomuseum.
san jose ဘုရားကျောင်း
၁၇ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအနုပညာဗိသုကာများ၏ Canon များကိုတုန့်ပြန်မှုမှာထူးဆန်းသည် ကျောက်။ ၎င်းကိုမြို့တံခါးဝတွင်တွေ့ပြီး၎င်းကိုလက်ရှိပြပွဲများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ထဲမှာ Dehesa de la Oliva Patones နှင့် ၄ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးသည် ၁၂ ရာစုနှင့်ပုံစံ၏သေးငယ်သောဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည် Romanesque-Mudejar။ ပျက်စီးသွားတယ် စတုရန်းပုံသဏ္-ာန်ပုံဖော် apse နှင့်ဗဟို nave ၏အစကိုသာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျက်စားရာမှာကြည့်ဖို့သင်ပိုရှိသည်။
အဆိုပါ Reguerillo ဂူ
၎င်းသည်မက်ဒရစ်အဝန်းတစ်ခုလုံးတွင်အကြီးဆုံးမြေအောက်လိုင်ဖြစ်သည်။ အောက်ပိုင်းသုံးခုသည်ပိုရှည်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနေရာများ Labyrinth သို့မဟုတ် Gran Vía။ ထိုနည်းတူစွာလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ပန်းချီကား။ သို့သော်လက်ရှိတွင်သင်ကြည့်ရှု။ မရပါ။ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကြောင့်၎င်းကိုပိတ်ထားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်များမှာလည်း Dehesa de la Oliva တွင်တည်ရှိသည်။
Castro Dehesa de la Oliva ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ
ရောမခေတ်မတိုင်မီက၎င်းကိုအောင်နိုင်သူများရောက်ရှိလာချိန်တွင်၎င်း၏လမ်းများနှင့်အဆောက်အအုံများတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည် ကျောက်စိမ်း နှင့်လက်ရှိတူးဖော်လျက်ရှိသည်။
၎င်းသည် ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောရေကာတာဖြစ်ပြီး၊ သူသည်ရေများကိုထိန်းချုပ်သည် Lozoya မြစ် ၎င်းသည်မက်ဒရစ်ကိုရေပေးသောတူးမြောင်း de Isabel II ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြင့်နှစ်ဆယ့်ခုနစ်မီတာနှင့်အရှည်ခုနစ်ဆယ်နှစ်ရှိသည့်၎င်း၏အတိုင်းအတာများကြောင့်သင့်ကိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အထူသည်ခြေရင်းတွင် ၃၂ မီတာရှိပြီးထိပ်တွင်ခုနစ်ခုရှိသည်။ ဒီအရာအားလုံးကသူမကိုလုပ်ခဲ့တယ် ယင်း၏အချိန်တွင်ရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းကို.
Patones de Arriba ၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင့်အားကြီးကျယ်ခမ်းနားစေမည့်လမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် တောင်တက်လမ်းကြောင်း။ ဒီသဘောနဲ့သင်နီးကပ်လာနိုင်ပါတယ် အဆိုပါCárvadas, အခြားဂြိုဟ်ကနေပုံရသည် capricious ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု။
သင်လည်းလေ့ကျင့်နိုင်သည် တောင်တက်ခြင်း သင်ထွက်ခွာသည့်အခါအယ်လ်အာတာဇင်ရေလှောင်ကန်ဆီသို့သွားသောလမ်းကြောင်းကိုယူပါ။ လှည့်လည်ကြည့်တဲ့အခါမင်းတွေ့လိမ့်မယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူရှုထောငျ့.
Patones ၏တစ် ဦး ကသိချင်စိတ်
ထိုကဲ့သို့သောမြို့ငယ်လေးတွင်၎င်း၏ဒဏ္legာရီလည်းရှိသည်။ အကြောင်းပါ အဆိုပါ Patones ၏ဘုရင်အဖြစ်ပင်ထိုကဲ့သို့သော Illustrious ခရီးသွားများကစုဆောင်းခဲ့သည် အန်တိုနီယို Ponz XVIII ရာစု၌။ သူသည်ရာစုနှစ်များစွာတည်ရှိပြီးထောင်နှင့်ချီသောတောင်သူလယ်သမားများနှင့်တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်သူများ၏နာခံမှုကိုခံယူခဲ့သည့်သိုးထိန်းarchကရာဇ်ဖြစ်ပုံရသည်။ စစ်မှန်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တုန်းကဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဘုရင်စနစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကအဆုံးသတ်သွားတယ်၊ ကားလို့စ် III, မြှို့နယ်၏မြို့တော်ဝန်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Patones de Arriba ၏အိမ်များ
Patones de Arriba တွင်ဘာစားရမည်နည်း
မက်ဒရစ်မြို့မှရရှိခဲ့သောခရီးသွား tourist ည့်သည်သည်ဟိုတယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆိုလိုသည်။ မင်းမှာမီနူးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကyouရိယာရဲ့ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုလည်းပေးတယ်။
သူတို့တွင်တောင်၏ဝက်အူချောင်း, အကြား အစအန, အ နားနား ဒါမှမဟုတ် marinated အသား။ တကယ်တော့, theရိယာ၏ gastronomy ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အသားများသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မွေးမြူရေးနှင့်အမဲနှစ် ဦး စလုံး။ ၎င်းတို့ကိုအဓိကအားဖြင့်ထင်းမီးဖို၌လှော်ပြီးကင်လုပ်ကြသည်။
ပိုစပ်စုသောတုံးဖြစ်ပါတယ် သိုးထိန်းရဲ့ပန်းကန်သိုးသငယ် chops, အစအနနှင့် chorizo ​​ရှိပါတယ်သော။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထို မှိုများ သင်ပင် mincemeat နှင့်အတူစားနိုင်သည့်canရိယာကနေ။ အဘယ်သူမျှမမရှိခြင်းလည်းရှိပါသည် တရားရုံး မဟုတ်သလို အာလူးခြောက်, မွှေးသော paprika နှင့်ကြော် torreznos မှဆီနှင့်သန့်စင်။ အချိုပွဲသည်ကနေဆင်းသက်လာသူများ miel, ထိုဒေသရှိအလွန်ကောင်းသောနှင့် ဆိတ်သငယ်ဒိန်ခဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း puff pastryအဆိုပါ အာဟာရ နှင့် ထောပတ်.
la Granja ပဲ
Patones သည်တောင်တန်းအလယ်၌ရှိနေစဉ်အချို့ရှိသည် အအေးဆောင်းရာသီအပူချိန်သုညအောက်သို့ကျဆင်းသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် နွေရာသီပူဖြစ်ကြသည် သိပ်မများသော်လည်း၊ ၃၀ ဒီဂရီအောက်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးသော်လည်းမိုးရေချိန်အမြင့်ဆုံးလသည်အောက်တိုဘာဖြစ်သည်။ Patones ကိုသွားလည်ရန်အချိန်မရွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီ.
ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲမြို့ဟာမက်ဒရစ်မြို့ကနေအရှေ့မြောက်ဘက်ကို ၆၀ ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကားထဲတွင်ယင်းကိုသွားမည်ဆိုပါကသင်ယူရမည် မြောက်အဝေးပြေး (AI) နှင့်ကီလိုမီတာငါးဆယ်ခန့်တွင်ထားရမည် အမျိုးသား 320။ သင် Torrelaguna ကိုလိုက်ပြီး၊ ဒီမြို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်, က M-102 ဒါကမင်းကို Patones de Abajo ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်။
ဤဗီလာတွင်သင်ရပ်။ လမ်းလျှောက်နေခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာအထက်ပိုင်းတွင်ကားရပ်ရန်အိမ်နီးချင်းများကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ နှစ်ခုရှိတယ် မြို့ပြဘတ်စ်ကားလိုင်းများ Plaza de Castilla de မှထွက်ခွာပြီး Patones သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည် မက်ဒရစ်။ ၎င်းတို့သည် L197 နှင့် L197A ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Patones de Arriba သည်အနက်ရောင်ဗိသုကာပညာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အထူးကောင်းမွန်သော gastronomy ရှိသည်။ ဒါကိုမင်းလည်ပတ်လိုသလိုမခံစားရဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » အထက်မှ Patones